Jeermiska oogada lagu nadiifiyo - JUAN JUAN
elektiroonigga oo ay ku jiraan taleefannada casriga ah
Kiniiniga iyo Xakamaynta Fog
Calaamadda A.Celli oo ah dhar aan tolmo wanaagsan lahayn ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo dharka sidaa darteed dusha sare ayaa siman oo siman. Spunbond, miiqyada, hawada aan dunta lahayn ee hawada lagu nadiifiyo ayaa xulasho guud u noqon doonta dharka. Qaabka Dot, Embossed, Toosan, Iskutallaab, Mesh, EF Texture ayaa loo dooran doonaa noocyo kala duwan oo ah dhar aan tolmo lahayn oo loo isticmaalo tirtiraha qoyan waxaa ka mid ah tirtirka ilmaha, masaxyada la isku qurxiyo, masaxaadda aalkolada, tirtiridda masaxa, tirtirka guryaha, iwm.
Farqiga u dhexeeya mashiinka Shiinaha iyo mashiinka Jarmalka waa saxnaanta saxanka isku laaban.
Hore: 75% Masaxda Aalkolada
Xiga: Masaxyada Qalalan (Canister)